Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. जिल्ला आयुर्वेद केन्द्र बाजुरामा बिरामीको संख्या बढ्यो – Emountain TV
जिल्ला आयुर्वेद केन्द्र बाजुरामा बिरामीको संख्या बढ्यो
बाजुरा, २८ माघ । पहिले पहिले जिल्ला आयुर्वेद केन्द्र बाजुरामा बिरामीको आवत जावत शून्य हुन्थ्यो । जिल्लावासीलाई नै त्यहाँ उपचार हुन्छ र औषधी पाइन्छ भन्ने थाहा थिएन । तर पछिल्लो समय केन्द्रमा उपचार गर्न आउने बिरामीको चाँप बढेको छ ।
पछिल्लो समयमा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले आफ्नो सेवा प्रभावकारी बनाएपछि उपचार गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र बाजुराले निशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्न थालेपछी बिरामीको चाप बढेको हो । अहिले दैनिक सरदर १५ जनासम्म उपचारमा आउने गरेको केन्द्रको भनाई छ ।
केन्द्रको उपचारमा बाजुरावासी समेत सन्तुष्ट देखिएका छन् । अस्पतालमा धाएर निको नभएको समस्या केन्द्रमा गएपछी निको भएपछी स्थानियमा केन्द्रप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ । केन्द्रमा बाथ, अम्लपत्ति, दम, खोकी, नसाको समस्या भएका बिरामीहरुको उपचार प्रभावकारी देखिएको छ ।
यस बाहेक केन्द्रमा सुनौला हजार दिनका आमालाई दुध बढाउने औषधि र जेष्ठ नागरिकको लागी रसायन औषधि बितरण गर्ने गरिएको छ । अस्पतालमा ओपिडी सेवा, पुर्व कर्म, पञ्चकर्म सेवा र औषधि बितरण हुने गरेको छ ।
ढिलो रिपोर्टले उपचारमै असर, कोरोना संक्रमण पोजिटिभ भएको रिपोर्ट १४ घण्टा ढिलो
क्वारेन्टाईनमा स्वाथ्यकर्मी माथी कुटपिट